Arsenal Oo Kor U Qaaday Xiisaha Ay U Qabto Xiddiga Paris Saint-Germain Georginio Wijnaldum.
HomeWararka CiyaarahaArsenal oo kor u qaaday xiisaha ay u qabto xiddiga Paris Saint-Germain Georginio Wijnaldum.
January 11, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka France, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Kooxda Arsenal ayaa lagu soo waramayaa in ay sare u qaadi doonto dadaalka ay ugu jirto in ay dib ugu soo celiso horyaalka premier League xiddiga kooxda Paris Saint-Germain ee Georginio Wijnaldum .
Gunners ayaa lumisay Thomas Partey iyo Mohamed Elneny oo ka qeyb galaya koobka qaramada Afrika, halka Granit Xhaka uu dhawaan laga helay COVID-19.
Natiijo ahaan, Mikel Arteta ayaa lagu qasbay inuu soo geliyo Albert Sambi Lokonga iyo Charlie Patino si ay u wada ciyaaraan ciyaartii FA Cup ee Axadii ay la ciyaareen Nottingham Forest, taasoo Gunners looga badiyay 1-0.
Iyadoo Arteta uu xaqiijiyay in Arsenal ay isku dayi doonto inay lasoo saxiixato ciyaaryahan khadka dhexe ah bisha Janaayo, Fichajes ayaa sheegaysa in Gunners ay isku dayi doonto inay Wijnaldum ka iibisato PSG.
Laacibkii hore ee Liverpool ayaa ku dhibtooday inuu degto Parc des Princes intii uu joogay Mauricio Pochettino , waxayna warbixintu sheegtay in PSG ay ku iibin karto wax ka yar €15m (£12.5m).
Wijnaldum ayaa dhaliyay seddex gool iyo hal caawin isagoo muujiyay 24 kulan oo uu u saftay PSG xilli ciyaareedkii 2021-22, waxaana uu qandaraas kula jiraa Parc des Princes ilaa 2024